Geedo geedo waaweyn iyo geedo
Beeraley kastaa wuxuu jecel yahay geedaha sannad walba inuu ku raaxaysto dalagyo taajir ah oo tayo sare leh, marnaba waayin, iyo nooc kasta oo soo jiidasho leh si dhakhso ah oo dhakhso ahna loo qaato xidid. Si aad u muujiso dhammaan riyooyinkani waa mid dhab ah haddii aad tahay khabiir ku saabsan dalagyada miraha. Waxaan fahamsanahay waxyaalahan soo jiidashada leh ee aadka u xiisaha badan.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan beerashada lowska Manchurian iyo daryeesha
Qaraabo yar yar oo walwal ah ayaa ka yimid Bariga Fog. Meelaha dabiiciga ah, waxaa laga heli karaa Waqooyiga Shiinaha ama Jasiiradda Kuuriya. Midhaha Manchurian waxay u egtahay geed sida duurjoogta ah, dhinac dhinac ah oo leh xayawaan jilicsan. Warshad cajiib ah ayaa leh sifooyin badan oo faa'iido leh.
Noocyada qaboobaha beerta
Haddii aad go'aansato inaad ku beerto lingonberries xagaaga xagaaga, waa inaad barataa naftaada noocyo kala duwan. Waxaan kuu sheegi doonaa noocyada beerta lingonberry inay ugu fiican tahay inay doortaan, oo sharaxaan kuwa ugu caansan. "Coral" Kala duwan waa nooc geedo ah oo dhererkiisu yahay 30 cm, dhexroorka taajka waa isku mid. Waxay ku koraan caleemo qoyan oo qoyan, cagaarka peat waa meel fiican oo ay ku koraan.
Xeerarka guud ee geedaha gooyaa guga
Dhaqan kasta ama geed kasta oo lagu beeray ujeedo qurxinta ama helitaanka alaabeed waxay u baahan tahay caleemo, waa in loo sameeyaa sida waafaqsan shuruucda qaarkood, haddii kale waxaa jiri doona waxyeello ka badan ta wanaagsan. Maantana waxaan ka hadli doonaa shuruucda geedka geedka iyo geedaha, ka wada hadla baahida ficillada noocan oo kale ah, iyo sidoo kale si faahfaahsan u qeexida habka oo dhan.
Sida loo xaliyo ubaxyada tufaaxa beerta
Dhamaanteen waan jecelnahay oo waxaan u kori doonaa tufaax xagaaga xagaaga. Nasiib darro, mararka qaarkood waxay saameynayaan cuduro kala duwan iyo cayayaanka - badanaaba waxaa soo weeraray qashinka tufaaxa, kaas oo ah in si deg deg ah loo xakameeyo. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa cayayaankan iyo sidaad uga takhalusi lahayd.
Noocyada kala duwan ee blueberries "Patriot": beerashada iyo daryeelka dalka
Markii hore, blueberries waxaa loo tixgeliyey warshad duurjoog ah oo ku kori doonta oo kaliya goobaha qoyaanka ama kaymaha. Haatan bannaanka u badan ogahay in ay tahay jeexan guri, aan qabyo ahayn ee dayactirka, laakiin waqti isku mid ah la siinayaa goosashada wanaagsan. Si aad u gaarto ubax badan, waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhowr shuruuc oo fudud oo aan hoos ku qeexnay.
Waxay dhacdaa in xilliga xagaaga ama beerta ay yihiin jirrido. Qaar waxay doorbidaan inay raraan iyaga oo aan xitaa malaynayn in ay samayn karaan asal asal ah ee naqshad dhuleed. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa waxa laga sameyn karo jirridda iyo sida quruxda u ah inay qurxiso. Sida loo qurxiyo Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo qurxiyo jirridaha.
Alycha Kuban asalkiisu yahay: dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Kubirka Kuban waa noocyada ugu caansan ee loo yaqaan "cherry hybrid". Wuxuu ku raaxaystaa guul wanaagsan oo xaqiiqda ah in xitaa maxkamadaynta ugu yar ay keento goosashada hodanka ah, iyo midhaha caan ku yihiin guryaha ganacsi ee wanaagsan iyo dhadhan fiican. Intaa waxaa dheer, tubada Kuban Kuban ayaa leh iska caabin adag oo dhaxan, kaas oo u ogolaanaya in midho laga helo gobol kasta, inkastoo noocyada kala duwan ay weli u baahan yihiin derisyo qarsoodi ah.
Kala duwan ee Honeysuckle Volkhov
Honeysuckle waa warshad leh faa'iidooyin badan. Berry this berry delicious, dukaanka of fiitamiin, iyo qurxinta deyrarka iyo goobaha. Sababtaas awgeed ayaa dad badani rabaan inay dhaqankan ku yeeshaan dhaqaalahooda guryaha. Noocyada ugu caansan ee loogu talagalay taranta gaarka ah waa Honeysuckle honeysuckle Volkhov.
Geedo gooyaa guga, dayrta, xagaaga
Dhirta midhaha leh ee geedaha ayaa ah wax lagama maarmaan ah. Hadafkiisu waa inuu hagaajiyo dhirta, si kor loogu qaado koritaanka jihada saxda ah iyo in lagu gaaro fruiting waxtar leh. Gooyaa ma jirto wax is hortaag ah, laakiin liddi ku ah - waxay la socotaa shuruucda dabeecadda, iyaga oo ku tiirsan. Dhab ahaantii, waa habdhaqan nidaamyada dabiiciga ah, oo ah mid ka mid ah waxqabadyada daryeelka beeraha beeraha lagu beeray oo aan u oggolaan inay u ordaan duurjoogta.
Sida loo sameeyo jidka ka baxa qoryaha oo ay la socdaan gacmahooda
Raadooyinka xagaaga ee xagaaga ma aha oo keliya qodob lagama maarmaanka u ah calaamadeynta dhulka iyo u dhaqaaqida agagaarka. Sidoo kale waa qayb ka mid ah qurxinta oo qaadeysa culeyska daawada heestu. Geedi socodka abuurista xagaa xagaaga ayaa la fududeeyay sababtoo ah helitaanka qalabka lagama maarmaanka ah iyo qalabka dukaamada. Foomka iyo alaabta wax soo saarka waxay ku xiran tahay kaliya doorashadaada.
Cudurka psifdotsug aan caadi ahayn: sifooyinka koraya
Naqshadaha casriga ah ee casriga ah ayaa sii kordhaya iyagoo adeegsanaya naqshad jilicsan ee qaabeynta sawirada, jardiinooyinka iyo waddooyinka, laakiin dadka intooda badan, oo ay soo maraan geedkan quruxda badan, waxay u qaadan doonaan qoryahooda caadiga ah. Haa, labada noocyada waxay leeyihiin qoyska weyn ee Sosnovykh, si kastaba ha ahaatee, si ka duwan sida ay qaraabo yihiin, dhejisku ka yar tahay dalbanaya daryeelka, iyo taajkii waa mid aad u qancin karo xirfadaha ubaxyada.
Waxa la sameeyo haddii geedaha aan daaqin caleemaha jiilaalka
Iyadoo bilowga dayrta, dhirta iyo geedaha badankood, ee loogu talagalay jiilaalka, daadinayaan caleemo. Ka hor inta aan geeddi-socodka la sameyn, waxaa jira isbeddel ku dhaca midabka caleemaha. Laakiin mararka qaarkood waxay dhacdaa in caleemuhu ay ku sii jiraan laanta, xitaa marka cimilada qabow ay timaado. Aan wada barto sababta uu u dhaco, waxa ay u horseedi karto iyo sida loo caawiyo geedaha.
Sawirada geedka: qaababka, qurxinta goobta iyo goobta saxda ah
Ninka casriga ahi wuxuu si joogto ah uula kulmaa walbahaarka dareenka ee daryeelka iyo isbeddelada magaalooyinka waaweyn. Qalabka maskaxeed ee ku yaala baarkinka oo ka mid ah sawirro cajiib ah - tani waa waxa ka caawiya in la isku dejiyo oo la furo. Si loo abuuro sawirada si aad u eegto beertaada si habboon oo is raacsan, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado waxyaabaha gaarka ah ee meelaynta dhaqankooda iyo inay kala soocaan noocyada iyo noocyada.
Qalabka geedka dhirta miraha ah ee dayrta
Daryeelida geedaha khudradda ah waxaa ka mid ah dhowr tallaabo oo lagama maarmaanka u ah caafimaadka iyo muddada dheer iyo, si waafaqsan, goosashada wanaagsan. Mid ka mid ah qiyaasta noocaas ah waa miro. Waxaan ka hadli doonaa shuruucda habraaca iyo taariikhaha ay haystaan ​​xilliga dayrta ee qodobkan. Xeerarka aasaasiga ah ee geedka dhirta xilliga dayrta.In xilliga dayrta, nidaamka waxaa la fuliyaa ka dib goosashada, ujeedada ugu weyn waa in la diyaariyo jiilaalka.
Teknoolajiyada iyo sharciyada loogu talagalay samaynta boodhka bukaanka
Blackberry waa qaraabo u dhow raspberry. Sidaa darteed, daryeelka duurka u waxaa lagu fuliyaa mabda'a isku mid ah. Goobo Blackberry, sida raspberries, waa mid fudud, laakiin waxay u baahan tahay daryeel dheeraad ah. Tixgeli farsamooyinka sahlan ee lagu xoqayo dhirta yaryar. Maxaa loo baahan yahay Inkastoo blackberry uu yahay geedka dilka ah, laamihiisa waa bienaal.
Khudradda kala duwan ee "Invicta": dabeecadaha, beerashada agrotechnik
Casriga kala duwan ee "Invicta" waxaa loola jeedaa noocyo badan oo aad u ballaadhan leh oo leh marxalad kakan. Kala duwanaanta noocaas ah waxaa loo tixgeliyaa mid caadi ah, taas oo la baro. Invicta waa mid aad u caan ah beeralayda, noocyo badanaa waxaa loo doortaa warshadaha warshadaha iyo beerista beeraha gaarka loo leeyahay.
Qaar ka mid ah cherry macaan "Vasilisa": sifooyinka, siraha ee beerashada guul leh
Miro iyo dhadhan fiican oo miro ah oo cherry macaan keeno xagaaga ma aha oo kaliya farxad laga isticmaalo, laakiin sidoo kale faa'iido weyn. Waxaa jira noocyo badan oo berry ah, waxayna dhammaantood ku kala duwan yihiin dhadhanka, midabka iyo cabbirka. Cherry-delicious macaan "Vasilisa" wuxuu leeyahay miraha ugu weyn ee noocyada jira on suuqa maanta.
Noocyada xilliga qaboobaha ugu fiican ee geedaha tufaaxa ee loogu talagalay Ruushka dhexe iyo daryeelka iyaga
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, geedka tufaaxu waa mid ka mid ah geedaha caanaha ugu caansan ee beerta beerta iyo khudradda. Si kastaba ha ahaatee, xulashada kala duwanaanta tufaaxa, waa muhiim inaad diiradda saarto xaaladaha cimilada ee gobolka taas oo geedka loo baahan yahay in la beeray, iskusho caabuq, dhalid, iwm. Sidaas, waxaan ka fikiri doonaa sifooyinka, sifooyinka asaasiga ah iyo noocyo kala duwan ee xilliga jiilaalka ugu wanaagsan ee tufaax, loogu talagalay beerista ee bartamaha Russia.